Qabsa’aa Mirga Namaa Miseensa Mana Maree Ameerikaa Du’aan Boqotan Joon Lwisiin Bakka Buusuuf Dorgommiin Geggeessamaa Jira
Adoolessa 20, 2020
Hoogganoonni paartii dimokraatotaa Yunaayitid Isteetis kanneen kutaa Joorjaa keessaa kaadhimamaa kan du’aan boqotan miseensa mana maree Joon Lewisn bakka bu’uu dhaan filannoo baatii Sadaasaaf dorgomu filachuuf wal ga’anii jiran.
Dubbi himtuun paartichaa akka jedhanitti dorgommii kanaaf namoota 131tu iyyate.
Koreen filannoos namoota xumura irratti dorgoman sadii hamma shaniitti calalee kan dhiyeessu yoo ta’u miseensonni koree paartichaa beekamoon 44 kaadhimamaa filachuuf jiru. Namni injifate Ripaablikaan kan ta’an Angele Stanton-King waliin dorgoma.
Lewis marsaa 17 miseensummaa mana mareen kan tajaajilan yoo ta’u, bara 2016 mormituu garee ripaablikaanotaan wal dorgomanii sagalee dhibba irraa harka 80 argachuun injifatan.
Qabsaa’aa mirga namaa beekamaa kan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afriikaa kan turan Lewis dhibee kaancerii rejiijiitiin yeroo dheeraaf dhukkubsataa erga turanii booda jimaata darbe umurii isaanii waggaa 80tti du’aan boqotan.
Qabsoo mirga namaa jabanaa kan Ameerikaa bara 1950mootaa fi 60moota keessatti ennaa hirmaatan umuriin isanii waggaa 23 kan ture yoo ta’u hoogganaa qabsoo mirga namaa Dr. Martin Luther King waliin walitti siqeenyaan hojjetaa turan.
Hospitaalonni Kutaa Filooridaa Sababaa COVID 19n Muddama Jala Jiraachuu Beeksisan
Weerarri Hawwaannisaa Gammoojjii Itiyoopiyaaf Yaaddessaa Ta’uu mala: Jaarmiyaan Qonnaa Addunyaa
Hawaasi Itiyoopiyaa kan Loos Anjeles Keessaa Sirna Dungoo Qabsiisuu Geggeesse
Muummichi Ministeeraa Itiyoopiyaa Dr. Abiy Ahimed Eertraa Daawwatanii Deebi’an
Filannoo Naannoo Tigraayiif Qophiin Xumuramaa Jiraachuu Itti Aanaa Prezidaantiin Naannoo Sanaa Beeksisan
Oolmaa Mana-murtii Hoogganoota KFO fi Namoota Dhiheenya Qabaman Kanneen Biroo